Raiisal Wasaaraha Soomaaliya oo mar kale ku baaqay in dadka abaartu saameysay loo gurmado | SAHAN ONLINE
Raiisal Wasaaraha Soomaaliya oo mar kale ku baaqay in dadka abaartu saameysay loo gurmado
MUQDISHO – Raiisalwasaaraha Xukuumadda Federaaliga ah ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa mar kale ugu baaqay shacabka iyo ganacsatada Soomaaliyeed in ay u gurmadaan shacabka abaartu ku hayso gobollada dalka.
Raiisal Wasaare Kheyre ayaa sheegay in shacabka abaartu hayso ay u baahan yihiin in gacan mid ah loogu gurmado.
Ganacsatada ayuu sheegay in xiligan ay tahay waqtigii loo baahnaa iney u gurmadaan shacabka Soomaaliyeed ee abaartu ku hayso gobollada dalka.
Haddii ay jirto maalin la idiin baahan yahay, maanta ma jirto maalin la idiinkaga baahi badan yahay, waxaan idinka codsanayaa inaad si dhaqso leh ku bixisaan wixii aad awoodaan ee aad ku taakuleyn kartaan shacabka abaareysan” ayuu ku yiri R.wasaare Kheyre xubnihii ganacsatada oo ay hogaaminayeen Rugta ganacsiga Soomaaliyeed.
Abaar baahsan ayaa xiligan ka jirta gobollada dalka taasoo saameyn ku yeelatay dadka iyo duunyada ku dhaqan gobolladaas.